कांग्रेसले आज पनि संसद चल्न नदिने
२०७५ माघ ८ मंगलबार ११:२४:०० प्रकाशित
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको सोमबारका बैठकहरु अवरुद्ध भएकोमा सत्तापक्ष र विपक्षबीच अझै पनि ठोस सहमति हुन सकेको छैन । आज मंगलबार दिउँसो ३ बजे सम्मका लागि स्थगित प्रतिनिधिसभाको बैठक अझै पनि चल्ने कि नचल्ने भन्ने बारेमा अन्योल देखिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा सत्तापक्षले ठोस जवाफ नदिएकाले आफूहरु हिजोकै रणनीतिमा रहेको बताएका छन् । सरकारले गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा रहेका अस्पताल विघटन गर्न लागेको भन्दै विपक्षले चर्को आलोचना गर्दै आइरहेको छ । खाँडले भने,‘‘हामी हाम्रो अडानमा यथावत छौं ।’’
सोमबार विभिन्न चरणमा भएको सत्तापक्ष र विपक्षको वार्तामा सत्तापक्षले भने सो विषयमा यसअघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिइसकेकोले विवाद गर्न नमिल्ने जनाएको थियो ।
सत्तापक्षका एक नेताले बताए अनुसार विपक्षले प्रधानमन्त्री ओली यहाँ नभएपनि मन्त्रिपरिषद्को बैठक डाकेर अस्पतालको सम्बन्धमा निर्णय गर्न आग्रह गरेको थियो । सो संवादमा सहभागी नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, “तपाईंहरु भविश्यमा सरकारमा पनि जान सक्ने दल भएकोले प्रधानमन्त्री नभएको बेलामा मन्त्रिपरिषदको बैठक डाक्ने नजिर बसाउनुभयो भने यहाँहरुलाई पनि अप्ठेरो पर्ला नि ! भन्ने कुरा राख्दा विपक्षी सहभागी पनि हास्नुभयो।”
नेम्वाङले चाहिँ बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा सभामुखबाट नै सो विषयमा रुलिङ भइसकेका कारण विपक्षी दलले अब त्यस विषयमा विवाद नगर्ने अपेक्षा गरिएको बताए । सत्तापक्षका नेताहरुले अस्पतालको विवाद भन्दा पनि नेपाली कांग्रेसले चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई अवरोध गर्नका लागि यसरी संसद अवरुद्ध गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् ।
नेकपाका एक नेताले भने,‘‘उहाँहरुले प्रधानमन्त्री फर्किने बेलासम्म चिकित्सा शिक्षा विधेयक अल्मल्याउन खोजेको जस्तो देखियो । नत्र विवाद गर्नुपर्ने कारण नै छैन । केही दिन लम्बिएपछि डा. केसीको स्वास्थ्य पनि अझ बिग्रन सक्छ । र आफ्नो पक्षमा यो मुद्धालाई पार्न सकिन्छ भन्ने सोच्नुभएको होला ।’’
सोमबार दुई पक्षबीच वार्ता हुनुअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकको प्रस्तावको कपि पनि मगाइएको थियो । सो कपिमा प्रतिपक्षले उठाएको जस्तो कुरा नपाइएको सत्तापक्षका नेताहरुले बताएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारले सरकार पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा मुलुकमा भएका परिवर्तनलाई ओझेल पार्न खोजिरहेको हिजोको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आरोप लगाएका थिए । सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा खुलेका अस्पताल विघटन गर्न लागेको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका थिए । यसैगरी राष्ट्रियसभाको बैठकमा पनि सोही विषयमा विवाद भएको थियो ।